သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာအေးကျော် ပြောတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း ~ Myanmar Express
သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာအေးကျော် ပြောတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း
မေး။ ။ လွတ်လပ်ရေးမရမီ ရခိုင်ပြည် နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကို ပြောပြပေးပါ။ဖြေ (ဒေါက်တာအေးကျော်) ။ ။ မြန်မာ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းမှာ ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အမြဲတမ်းရှေ့ကပါဝင်ခဲ့တယ်၊ အင်္ဂလိပ် ကိုတော်လှန်တဲ့နေရာမှာရော ဂျပန်ကိုတော်လှန်တဲ့နေရာမှာပါရှေ့တန်းကပါပဲ ၊ ရခိုင်တွေဟာ ဘာကို လိုချင် လို့ တော်လှန်ရေးမှာ ရှေ့တန်းကပါရသလဲဆိုရင် ရခိုင်ပြည်ကို ရခိုင်တွေက အုပ်ချုပ်ခွင့် ရချင်လို့ ဖြစ်တယ်၊အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ထင်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ပြောပါဆိုရင် ဆရာတော်ဦးစိန္တာ၊ဆရာတော် ဦးပညာ သီဟ၊ ဦးညိုထွန်း၊ ဦးအောင်ဇံဝေ၊ ဦးကျော်မင်း၊ ဦးဘစောစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ရခိုင်ပြည်တော်လှန်ရေး ရခိုင့် နိုင်ငံရေး လောကကထိတ်ထိတ်ကြဲတွေပဲပေါ့၊ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက် ဆိုရင်တော့ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ဟာနံပါတ်တစ်ပါပဲ။အဲဒီကာလက ရခိုင်တွေရဲ့ အနေအထားကို ခွဲစိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဗြိတိသျှတွေရဲ့အုပ်ချုပ် ရေးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အပိုင်းကတပိုင်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲတွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့အပိုင်းတွေကို လည်း တွေ့ရပါမယ်။ဦးညိုထွန်းဆိုတာက ၁၉၃၆ ခုနှစ် ကျောင်းသားသပိတ်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာရခိုင်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာရော ဗမာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာပါ လူသိများတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးပါ၊ ဒီကနေ့ မြန်မာသမိုင်းမှာ မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့ ကိုတော်လှန်ရေးနေ့ရယ်လို့ သတ်မှတ် ထားကြတယ်၊ ဦးညိုထွန်းခေါင်းဆောင်တဲ့ရခိုင်တွေဟာ ဂျပန်ကို မတ်လ(၂၇)ရက်ထက်စောပြီး ဖေဖော်ဝါရီ လ (၁၂)ရက်လား(၁၃)ရက်လား ကျနော်အသေအချာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒီကတည်းက စပြီး ဖက်ဆစ် ဂျပန်တော်လှန်ရေးကို ရခိုင်ပြည်က စတော်လှန်ခဲ့တယ်။ ဒါကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မိန့်ခွန်းတွေ ထဲမှာ လည်း ပါပါတယ်။ မေမြို့ မိုးကြည့်ရေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့် ခွန်းများထဲမှာ ရှာဖွေတွေ့ ရှိနိုင်ပါတယ်။လေ့လာကြည့်ပါ။မေး။ ။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်ရဲ့အခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ ရခိုင်တွေဟာ အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်တဲ့နေရာမှာရော။ဂျပန်ကိုတော်လှန်တဲ့နေရာမှာပါ ရှေ့တန်းက ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြောခဲ့ပြီးပြီ၊အဲသလို ဗမာအပါအ၀င် အခြားသော တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အတူတကွ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တာရဲ့ တကယ့် ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲဆိုရင် ရခိုင်တွေဟာ မိမိတို့ရခိုင်ပြည် ကို ရဖို့ပါပဲ၊ တန်းတူအခွင့်အရေး ရဖို့ ပါပဲ၊ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ရဖို့ ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိလာတဲ့အခါ ရခိုင်တွေအတွက် ဘာမှမရခဲ့ဘူး၊ ပြည်နယ် အဆင့်လေးတောင် သတ်မှတ်ပေးတာကို မခံခဲ့ရဘူး၊ ရခိုင်တွေ မွန်တွေဟာ ဦးနုကိုပြည်နယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပေ မယ့် ဦးနု ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့် ရခိုင်တွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်မပြည့်ဝခဲ့ရဘူး၊ဦးနုဟာ သူ့ ပါတီအကျိုးကိုသာ ကြည့်ခဲ့လို့ တကယ်အရေးပါတဲ့ National Interest(အမျိုးသားအကျိုး အမြတ်) ကို ဆုံးရှုံး စေခဲ့တယ်။မေး။ ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ဆယ်နှစ် ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေခဲ့ပါသလဲ။ဖြေ။ ။ ဦးနုရဲ့ ဖဆပလ ခေတ်မှာ ရခိုင်ပြည်မှာ အဓိကလွှမ်းမိုးတဲ့ပါတီကြီးနှစ်ခုရှိတယ်၊ ဖဆပလ နဲ့ ရတည (ရခိုင် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီ)တွေပါ၊ရတညရဲ့ခေါင်းဆောင်က ဦးကျော်မင်းဖြစ်တယ်၊ သခင်ဦးကျော်ရင် တို့လည်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ပါတယ်၊ ဦးအောင်ဇံဝေ၊ တောင်ကုတ်က ဦးကျော်တင်စတာတွေက ဖဆပလတွေ၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ဖဆပလ နှစ်ခြမ်းကွဲချိန်မှာ တည်မြဲ(ဖဆပလ)နဲ့ သန့် ရှင်း (ဖဆပလ) ဆိုပြီး ရှိလာတယ်၊ ဒီတော့ သန့် ရှင်းဖဆပလခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဦးနုဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကျိုး ထက် သူ့ ပါတီအကျိုးကိုပဲကြည့်တဲ့အနေနဲ့ မေယုခရိုင်ဆိုတာ လုပ်လာတယ်၊ အဲဒီမှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေကိုမဲရဖို့ အတွက် မျက်နှာသာပေးတယ်၊ မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ပေးတာတွေ ရှိလာခဲ့တယ်၊ကိုလိုနီခေတ်က ဘင်္ဂါလီ တွေဟာ ရခိုင်ပြည်ကို အလုပ်လာလုပ်တယ်၊ စပါးရိတ်တယ်။လယ်ထွန်တယ်။ ပြီးရင် ပြန်သွားကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဦးနုက မဲရဖို့ အတွက်မျက်နှာသာပေးတာနဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ နိုင်ငံရေးအဆင့်ထိကို တိုးတက် လုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ လာရတယ်။ သူတို့ အထဲက စူလတန် မာမွတ်ဆိုတာ ဟာ ထင်ရှား တဲ့သူ တဦး ပါ၊ရခိုင်တွေရဲ့ရတည ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရရှိရေးကို တစိုက်မတ်မတ် ဆက်လုပ်လာခဲ့တယ်။မေး။ ။ ဦးနုက အဲ့ဒီလို လုပ်ခဲ့တော့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာခဲ့ပါသလဲ။ဖြေ။ ။ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ ၁၉၅၈။ ၅၉။ ၆၀ ကာလများမှာ ဖလပလ နှစ်ခြမ်းကွဲလာတယ်၊ နှစ်ခြမ်းကွဲလာတော့ ဖဆပလ အားနည်းလာတယ်၊ အဲဒီမှာ ဦးနုက သူ့ ပါတီအနိုင်ရဖို့ မေယုခရိုင်ကို ဘင်္ဂါလီ တွေကို ၀င်ခွင့်ပြုတယ်၊ အဲဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းက ဒီကနေ့ပြည်ပမှာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အသံထွက်နေ တဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းပါပဲ။မေး။ ။ ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဟာ ဘယ်တုန်းက စပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိပါသလား။ဖြေ။ ။ ၁၉၆၀ ၀န်းကျင်လောက်မှာ စပေါ်ခဲ့တယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စူလတန် မာမွတ် ဆိုတဲ့ ဘင်္ဂါလီကြီးဟာ အမတ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် တခါမှ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကား ကို သုံးစွဲခဲ့တာ မတွေ့ ရပါဘူး၊ လွတ်လပ်ရေးမတိုင်မီကမြန်မာ့သမိုင်းမှာရော ရခိုင်သမိုင်းမှာရော ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာမရှိခဲ့ပါဘူး၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခါစမှာရော မရှိခဲ့ပါဘူး။မေး။ ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကရော ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်ပါသလဲ။ဖြေ။ ။ ဆရာကြီး ဦးသာထွန်း ကျန်းမာစဉ်တုန်းက သူရန်ကုန်ကိုလာတိုင်းကျနော့်ဆီကိုဝင်တယ်၊ သူနဲ့ လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း စာအကြောင်းပေအကြောင်းသမိုင်းအကြောင်း တွေကို ဆွေးနွေးတယ်၊ အဲဒီ အခါမှာ ဒီဝေါဟာရကို ဆရာကြီးဦးသာထွန်းက အခုလို ဆိုပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ ရခိုင်စကား လွင့်ဂျာကဖြစ်လာတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ လွင့်ဂျာဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ဥပမာ သစ်ပင်တွေကသစ်ရွက်တွေကြွေရင် လေထဲ မှာ ၀ဲပြီး ဦးတည်ရာမဲ့ လွင့်နေတာကို ဆိုလိုတယ်၊ ဒီဘင်္ဂါလီတွေကိုမှ အခုလို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ရည် ရွယ်ချက် ဦးတည်ချက်မရှိဘဲလွင့်နေတဲ့ဘယ်သူ့ ကိုမဆို ရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ လွင့်ဂျာလို့ ဆိုတယ်။ ဒါကိုဘာသာဗေဒနဲ့ ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်လည်း လွင့်ဂျာကနေ ရိုဟင်ဂျာလို့ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ် လို့ ကျနော် တက္ကသိုလ် ပညာပဒေသာ စာစောင်မှာကျနော်ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ ယရလ၀ ဆိုတဲ့ ဗျည်းတွေဟာ အသံပြောင်းလဲတဲ့ သဘောရှိ တယ်။(ဆရာကြီး ဦးသာထွန်းမှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု လက်ထက်က ရခိုင်-မြန်မာပညာရှိကြီးဖြစ်သည်။ ဦးနု ကိုယ်တိုင်ပဏ္ဍိတ် (ပညာရှိ) ဘွဲ့ အပ်နှင်းခဲ့ဖူးကြောင်း သိရသည်။ အယ်ဒီတာ)မေး။ ။ အခုကာလမှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေက ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသံကိုတောင်မကြားချင်လောက် အောင်ဖြစ် နေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ဖြေ။ ။ ဒီရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာဖြစ်လာဖို့ ရခိုင်ပြည်မှာ အရင်းခံတာကမူဂျာဟစ်တွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ ဟာ ရခိုင်ပြည်မှာ နေရာရဖို့ မြေရဖို့သူပုန်ထကြတယ်။ သူတို့ ဟာ အစက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဘင်္ဂါလီတွေပါ၊ ရှေးတုန်းကသူတို့တွေဟာ အလုပ်လုပ်ပြီးရင် သူတို့ နေရပ်ကို ပြန်ကြတယ်၊ နောက်ကြာလာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကိုယ်တိုင်က လူဦးရေပေါများလွန်းလို့ နေရထိုင်ရအခက်အခဲရှိလာတယ်။ ဒီအခါ ဦးနုက မေယုခရိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘူးသီးတောင်၊မောင်းတော၊ ရသေ့တောင်နယ်တွေကို မွတ်စလင် ပြည်နယ် ထူထောင်ဖို့ မူဂျာဟစ်တွေကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အဲဒီမူဂျာဟစ်တွေက နာမည်သစ် ရိုဟင်ဂျာကို တင် သွင်းလာတဲ့အခါရခိုင်တွေက လုံးဝလက်မခံပါဘူး၊ မိမိတိုင်းပြည်ရဲ့ နယ်မြေတွေကိုရော ဘာသာ သာသနာကိုပါ အန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့ ဒီ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို ရခိုင်တွေက အသံကိုပင်မကြားနိုင်တာဖြစ်တယ်။မေး။ ။ ဒီရိုဟင်ဂျာ ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ နောက်ခံ အကြောင်းတရားကဘာတွေများဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ဖြေ။ ။ အင်မတန်မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းကောင်းတခုပါပဲ၊ တကယ်တော့ ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတာကအပေါ်ယံ ပြဿနာပါ၊ တကယ်နက်ရှိုင်းတဲ့ အရင်းခံက“အစ္စလမ်ဝါဒ လွှမ်းမိုးပြန့်ပွားရေး”ဆိုတဲ့ဟာက အရင်းခံ ပြဿနာပါ၊ အဲဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးတာက အာဖရိကတိုက် မြောက်ပိုင်းက တိုင်းပြည် တွေ၊အရှေ့အလယ်ပိုင်းက နိုင်ငံတွေက ငွေကြေးတွေ၊ လက်နက်တွေ စသဖြင့် လိုအပ်တာတွေကိုထုနဲ့ ထည်နဲ့ ပံ့ပိုးပြီး လုပ်ဆောင်နေတာကို တွေ့ ရတယ်၊ အရှေ့ တောင်အာရှကဆိုရင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ဒါကို အားပေးတယ်။ မွတ်စလင်ဘာသာပြန့်ပွားဖို့ လွှမ်းမိုးဖို့ နယ်မြေရရှိစေဖို့ အင်တိုက် အားတိုက် ကူညီတယ်၊ဒါကြောင့် သူတို့ ဟာ ရိုဟင်ဂျာအမည်ကို သုံးပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသား၊ရခိုင်တိုင်းရင်း သား ဖြစ်ဖို့ အားထုတ်လာတယ်၊ တကယ်တော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး၊မြန်မာတိုင်းရင်းသား လည်းမဟုတ်ဘူး။မေး။ ။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို နအဖက အသိအမှတ်လည်း မပြုဘူး၊ဘယ်တုန်းကမှလည်း မရှိခဲ့ဘူးလို့ အတိအလင်းဆိုပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပြည်ပမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများကောင်စီမှာ တိုင်းရင်း သား အခွင့်အရေးရဖို့ကြိုးစားနေတာတွေကိုတော့ ကြားဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရခိုင်တွေက ကန့်ကွက်လို့ အခုအချိန် ထိတော့ အောင်မြင်မှုမရသေးပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားဆိုတာ ဘယ်သူတွေကိုသတ်မှတ်ခဲ့ သလဲ ဆိုတာ ကို သိချင်ပါတယ်။ဖြေ။ ။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မှာ လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတရပ်ကို သတ်မှတ်ဖို့ဆရာဒေါက်တာမောင်မောင်ရယ်၊ ဆရာကြီးဦးစံသာအောင် ရယ်။ ကျနော်တို့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒေါက်တာမောင်မောင်က ဥပဒေ ပညာရှင်၊ ကျနော်က သမိုင်း၊ ဦးစံသာအောင်က အဲဒီတုန်း ကအထက်တန်းပညာဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပေါ့၊ နေရာကတော့ နိုင်ငံတော်ကောင်စီရုံးခန်းမှာပါ။အဲဒီမှာ ကျနော်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ရေးအတွက်ဆိုရင်ဘိုးတော်ဘုရား စစ်တမ်း ဆိုတာရှိတယ်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၀၀ ကျော်လောက်ကစစ်တမ်းကောက်ခဲ့တာ၊ အဲဒါဟာ အင်မတန်ပြည့်စုံ တယ်၊ အဲဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင်လာတဲ့ လူမျိုးတွေ အားလုံးကို ကျကျနနစစ်တမ်းကောက်ထား တာရှိတယ်၊ ရခိုင်တွေ၊ ကရင်တွေ၊ မွန်ကိုတော့တလိုင်းလို့ခေါ်တယ်၊ အဲဒီဟာကို မူတည်ပြီးရင် ဆုံးဖြတ်ရင် မကောင်းဘူးလားလို့ကျနော်က အကြံပေးတယ်။ အဲဒီအခါ ဆရာဒေါက်တာမောင်မောင်က မစောလွန်းဘူးလားလို့ပြန်မေးတယ်၊ ဒါဆိုရင်သမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ အလှည့်အပြောင်းဖြစ်တဲ့ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၂၄ ခုနှစ်ကစသင့်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်၊ ၁၈၂၄ က မြန်မာပြည် ကို အင်္ဂလိပ်တွေစသိမ်းတဲ့ နှစ်ပါ၊ဒါကို ဒေါက်တာမောင်မောင်က သဘောတူလို့ အဲဒီမတိုင်မီက နေထိုင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အဖြစ် သတ်မှတ်တယ်လို့ဥပဒေပြုခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာဆို တဲ့ အသုံးအနှုန်း မရှိခဲ့ဘူး။ Myanmar Express
26 June 2012 23:18
Go to Hell,Rapist Dog Aye Kyaw!
27 June 2012 01:39
27 June 2012 11:27
ငါတို့ မြန်မာနိုင်ကငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မရှိဘူး
28 June 2012 01:01
To MMT - You are dog and muslim terrorist.
28 June 2012 01:03
Myanmar and Non Muslim governments in the World not welcome Islam and Muslims because Islam and Muslims are Terrorists and Islamize Host Countries.Bangladesh Islamic Muslim Nazi Fascist Army invaded Myanmar through Rakhine State like Japanese Fascist army invade China through Manchuria ( Northeast China ) and Islamic Muslim Fascist Army want Myanmar to become Muslim (Islamic ) country.These inhuman Islamic Muslim Nazi Fascist army , invaders , rapists and killers , terrorists insult Rakhine people and Myanmar people by raping and killing and burning of Rakhine girls , Myanmar girls , Myanmar people , Rakhine villages and Myanmar villages . Declare war on Islamic Nazi Muslim Fascist army who raped Rakhine girls, ladies and Myanmar girls and ladies. We must lesson these Islamic Muslim Fascist army that we Myanmar will rape and behead your Muslim girls and kill and burn your Mosques , Muslim markets , Muslim villages and Muslim homes if you rape, behead our Rakhine girls , Myanmar girls and kill Rakhine and Myanmar people . Rape and behead their Muslim girls and burn all Mosques , Muslim markets, Muslim villages and homes for revenge. Defence our Buddism in Myanmar. Most Muslim are Nazis, Fascists , devils , evils , monsters and inhuman barbarians because they behead innocent non muslim religion. Only devils , evils , monsters and inhuman and barbarians behead innocent people. It is very cruel for civilized world. Civilized country and world don’t behead innocent people.
28 June 2012 01:04
Bangladesh Muslim Nazi Fascist army invade Rakhine State, Myanmar and want Myanmar to become Muslim (Islamic ) country. Bangladesh Islamic Muslim Nazi Fascists invade Arakan( Rhakhine ) state and Myanmar illegally and they are making Myanmar to become Muslim country. Muslims are making host country to become Muslim country by4systematic plans. They are (1) A million of Bangladesh Muslim Fascist army invade Arakan state and Myanmar illegally or legally by bribe to host country Politicians, Political party and Immigration Ministers and border immigration officers (2) Build many mosques in Myanmar and ( 3) Marriage to Arakan girls and Myanmar girls and convert their wives and sons and daughters to Muslims ( Islam ) and (4 ) organize other religious people in host country to convert and become Muslims. All Rakhine people and Myanmar people must unite and protest Myanmar government in Rakhine cities , Yangon , Naypyidaw , other big cities in Myanmar for the following demands until get Demands like All Myanmar people protest Shortage of Electricity in Myanmar. To prevent Bangladesh Islamic Nazi Fascist army Islamization ( host country to become Muslim country ) , Myanmar government must (1) Ban all Bangladesh Muslim Nazi Fascist immigrants legally or illegally . Deport all illegal Bangladesh Muslim Nazi Fascists and Muslims who got National ID by illegal ways to Bangladesh . Ban building of new mosque ( because Muslim and Islamic countries don’t permit to build Christian church , Buddhist Pagoda, Temple and Monastery and Hindu Temple , Jew Temple but they build million mosques in other religious countries . Muslims are selfish ).Ban Muslim marriage to Non Muslim Myanmars in Myanmar . Ban Non Muslim Myanmar marry to Muslims also . Reward anyone who inform authority that Muslim married to non Muslim . (2) Government must issue Islam Control law that One Muslim man marry one Muslim girl only ( not4Muslim girls ) and one child policy for Muslim couple. Government must jail Muslim couple for 10 years if Muslim couple have2children (2kids ) . If Muslims don’t abide the law , must deport them to Muslim countries. Reward anyone who inform authority that One Muslim couple has more than 1 Muslim kid or one Muslim has more than one wife .(3) Ban Sharia law ( Al Qaeda Islamic law ,Muslim Taliban laws ) (4) Ban non Muslim people convert to Muslim and Islam.(5 ) Protest and prison and fine for all corrupt Myanmar government officers , Politicians , Political Party and Immigration Minister and immigration officers and Myanmar Army officers in Myanmar Bangladesh border who support illegal Bangladesh Muslims immigrants , to build mosque , marriage to Muslims and convert to Muslims. Reward anyone who inform authority about immigration officers who support illegal Bangladesh Muslims immigrants and about illegal Bangladesh Muslims immigrants . Build strong and high border wall between Myanmar and Bangladesh.(6) Ban Any Myanmar political party issue National ID to Illegal Bangladesh Muslims for Myanmar Election.(7) Ban Bangladesh Rohingya Muslim representative in Myanmar Election and Myanmar Politics.
Bangladesh government don’t accept their fellow Bangladesh muslims. So Why we Rakhine state accept illegal Bangladesh Nazi fascist muslims ? We also don’t need to accept these illegal Bangladesh Muslims. We don’t need to pity on these Bangladesh Nazi Muslim Fascists. Illegal Bangladesh Nazi Fascist Muslim will ask Rakhine state for Islamic country like Pakistan and Bangladesh from India if we pity on these Nazi Fascist Muslims. They are Muslim separatists that separate Rakhine state from Myanmar. So Myanmar government wipe out these Muslim separatist like Chinese govermment wipe out Muslim separatists in Xinjiang , China. Why Bangladesh Islamic Nazi Fascist army Governments don’t accept their fellow Muslim Fascist invaders, rapists, killers and terrorists Bangladesh Muslim Nazi Fascists and don’t issue Bangladesh Citizen card ? They answered Rohingya terrorists for execuse . It is not right. The answer is clear because Bangladesh government want Myanmar to become Muslim (Islamic ) country. Myanmar will be Muslim country if Bangladesh government don’t accept their fellow Bangladesh Muslim Nazi Fascists because more Bangladesh Muslim Nazi Fascists live and get Myanmar Citizens in Myanmar. Myanmar will not be Muslim country if Bangladesh government accept and issue Bangladesh Citzen cards to illegal Bangladesh Muslim Nazi Fascists . Illegal Bangladesh Muslim Nazi Fascists are real Bangladesh Muslims because their religion , culture , language , face, color are same as Bangladesh Muslims. Illegal Bangladesh Muslims Nazi fascists ( Rohingyas ) are not same as Myanmar Ethnics face, color, language , culture. So Rohingyas are illegal Bangladesh Muslim Nazi Fascist invaders. Bangladesh Islamic Fascist army government and illegal Bangladesh Nazi Fascist Muslims already declare war on Myanmar government and invaded into Myanmar. Bangladesh Muslim Nazi Fascists burn all Rakhine villages because illegal Bangladesh Muslim Fascists want all Rakhine get out from Rakhine state. So Myanmar government must declare war on Bangladesh Islamic Nazi Fascist army government.
No Rohingya ethnicity in Myanmar History .Myanmar President U Thein Sein and NLD party leader Aung San Su Kyi must do step by step the follwing.Many famous and popular Rakhine and Myanmar Historians said “ There is no Rohingya in Myanmar and Bangladesh history” . It is right. Bangladesh Islamic Nazi Fascist government and Muslim Fascists named Muslims in Rakhine state to become Myanmar Ethnic in 1950 . So Rohingya is real illegal Bangladesh Muslim Fascists. No doubt about it. So don’t use Rohingya word . Only use Illgal Bangladesh Muslim Fascists instead of Rohingya in future . Nazi Fascist Bangladesh Government want Myanmar to become Muslim country . So they don’t accept illegal 700,000 Bangladesh Muslim fascists from Myanmar . Rakhine ( Arakan ) state and Myanmar will be Muslim country if illegal 700000 Bangladesh Muslim Nazi fascists live in Rakhine state and Myanmar. These illegal Bangladesh Muslim Nazi fascists in Myanmar are real Bangladesh Muslims. Bangladesh Muslim Nazi Fascists invaded and insult Myanmar. They are liars .Myanmar President U Thein Sein and NLD party leader Aung San Su Kyi must do step by step . ( 1) Must do Press conference and clearly tell all Myanmar people and UK, USA and World governments and world media that Rohingya is not Myanmar ethnicity and Myanmar Nationality forever . There is no Rohingya in Myanmar and Bangladesh history. Bangladesh Nazi Fascist government and Muslim Fascists named Muslims in Rakhine state to become Myanmar Ethnicity. They are liars . There isastatement that Rohingya is illegal Bangladesh Muslims and Rohingya is not in Myanmar ethnic history and Myanmar Constitution. There must be have Muslim (Islam) control laws ( ban Muslims immigrants, ban Mosque and Islamic Koran books , Muslim schools and Islamic centers , 1 Muslim for 1 Muslim wives and 1 Muslim kid ) in Myanmar Constitution . If so, Bangladesh Muslims and World can't colonize Rakhine state and Myanmar.(2) Current Myanmar President U Thein Sein and NLD leader Aung San Su Kyi issue legal statement that Rohingya is not Myanmar Ethnicity and Myanmar Nationality.
28 June 2012 01:06
Myanmar government important first main operation is ( 1 ) Deport all 700 000 illegal Bangladesh Muslim Nazi fascists and Muslims who don’t have National ID or have ID ( illegal Bangladesh Muslims who got National ID by bribingalot of money to immigration officers in Myanmar Bangladesh border ) from Rakhine state and Myanmar to Bangladesh by force although Bangladesh government don’t accept their fellow Bangladesh muslims. We can’t deport if illegal Bangladesh Nazi Fascist Muslims are more than 1 million. Bangladesh Nazi Fascist Muslims will ask another Muslim country for Rakhine state in future like Pakistan and Bangladesh from India if Myanmar government don’t deport these illegal 700,000 Bangladesh Muslim Nazi Fascists from Rakhine state now. (2) Arrest and prison all current and former Myanmar immigration officers and Hospitals who took bribe from illegal Bangladesh Nazi Fascist Muslims and Myanmar Muslims for National ID and fake Birth Certificate. (3) All immigration officers and staffs in Bangladesh Myanmar border and Rakhine state must be Rakhine immigration officers and staffs because Rakhine officers don’t take bribe from Rohingya Muslims for National ID cards because of their patriotic . Form Rakhine Border Guard to defense border and arms to Rakhine people in Muslim majority to defense themselves like Thailand people in Muslim majority in southern Thailand. Myanmar Navy surveillance water in Myanmar Bangladesh for 24 hours/ 7days/ 52 weeks. Reward Any Myanmar Navy officers and Rakhine Border Guards ( Myanmar Government must form Rakhine Border Guards ) who shoot Bangladesh Muslims who enter Rakhine state and Myanmar illegally. Reward any Rakhine people who inform to Authority about illegal Bangladesh Muslims and authority who arrest illegal Bangladesh Muslims . (4) Establish strong Rakhine Border Guard Force in Myanmar Bangladesh Border. All Myanmar troop in Bangladesh Myanmar border must be Rakhine soldiers and shoot any illegal Bangladesh muslims cross river and come to Myanmar side. Build strong and high border wall between Myanmar and Bangladesh. All immigration officers and staff must be Rakhine people and pay good salary them to avoid corruption. (5 ) Establish good economy in Maungdaw Town and other Muslim majority towns in Rakhine state and make good economy and transportation to these towns to attract more Rakhine and Myanmar people to settle in these towns . If so, Rakhine and Myanmar people will be majority in future . Rakhine people and Myanmar people Look and move to Muslim majority towns. Myanmar government persuade more Myanmar people settle and live in Rakhine State and make Myanmar people will be majority in Rakhine State like Chinese government make that Chinese are majority in Xinjiang muslim Province in China ( Chinese government persuade more Han Chinese settle and live in muslim Xinjiang Province , China ).
Myanmar Government must make Rakhine people and Myanmar people majority in muslim majority towns near Myanmar Bangladesh Border and Rakhine state.Establish good economy in Maungdaw Town and other Muslim majority towns in Myanmar Bangladesh Border and Rakhine state and make good economy and transportation to these towns to attract more Rakhine and Myanmar people to settle in these towns . If so, Rakhine and Myanmar people will be majority in future . Rakhine people and Myanmar people Look and move to Muslim majority towns. Myanmar government persuade more Myanmar people settle and live in Rakhine State and make Myanmar people will be majority in Rakhine State like Chinese government make that Chinese are majority in Xinjiang muslim Province in China ( Chinese government persuade more Han Chinese settle and live in muslim Xinjiang Province , China )
28 June 2012 01:08
Islam don’t respect other religions in the world and kill other religions quietly or violently. Saudi Arabia is head of bad snake Islam.Saudi Arabia government don’t allow to build Christian Church , Buddhist Pagoda , Buddhist Monastery , Buddhist temple , Hindu Temple , Jewish Temple in Saudi Arabia but Saudi Government support and fund World Muslims to build Ten of Thousands of Mosques, Islamic Centers , Islamic Schools and others in their host countries. So Saudi Arabia is selfish and Head of Evil , Devil Muslims and Islam. Muslims majority destroy Churches in Bangladesh , Pakistan , Egypt , Indonesia , Malaysia , Philippines and destroy Buddhist Pagodas , Buddhist Monasteries , Buddhist temples in Afghanistan , Thailand , Indonesia and India and China and Hindu Temples in India , Jewish Temples in Israel and West Bank of Israel. Muslims and Islam are like Cancer . A few Muslim enter host country illegally . and they live quietly. Then they multiply muslims and Islamizaion of host country quietly .Then they kill host country’s other religions finally when muslims are majority in host country and host country become muslim country ( like Indonesia and Egypt) . They are like Cancer . Cancer enter host quietly and they multiply and kill their host finally when cancer spread to other organs in host body . Islamization World Muslim governments and Muslims are making all countries and the World to become muslim (Islamic ) countries by massive immigrants by bribe to immigrant officers and governments in all countries in the world . You can watch Islamization ( Muslims make host countries to become muslim countries ) in Youtube online ( internet ). You type Islamization in Youtube search. You will seealot of Islamization videos in Youtube.
Aung San Su Kyi dare to speak to the world that Rohingya is not Myanmar Ethnicity forever. She should not meet any pro Rohingya people, Media, Governments, Parties, organizations. Real good Myanmar leader dare to speak the world that Rohingya is not Myanmar Ethnicity forever like 88 leader Ko Ko Gyi said . Aung San Su Kyi is not real leader like Ko Ko Gyi. Ko Ko Gyi is real Myanmar leader. All Rakhine people and all Myanmar people must protest Aung San Su Kyi about she don't speak to the world that Rohingya is not Myanmar Ethnicity. Don't need to afraid of Rohingyas , Myanmar Muslims , Bangladesh government , pro Rohingya countries , governments and organizations . Rakhine people and Rakhine state and Myanmar people , Myanmar country are more important than Rohingyas , Myanmar Muslims and pro Rohingya countries , governments and organizations. She should not meet any pro Rohingya people, Media, Governments, Parties, organizations.
BBC and other pro Rohingya countries, Governments , Partys and OrganizationPro Muslim BBC and current UK government , UK Foreign Minister and VOA and UNHCR .World Rohingya , Saudi Arabia Government , Other Muslim country governments , World Muslim Organizations , World Muslims bribe , lobby and give millions of money to BBC, British Government ( One of Current UK cabinet is Muslim ) , VOA , World media , UN and NGO who support Rohingya. So Myanmar government and opposition leaders and all Rakhine people and Myanmar people in the World protest them. Arrest and prison Pro Rohingya Myanmar Muslims in Myanmar . Arrest and prison also pro Rohingya Myanmar muslims in UN, UNHCR, NGO in Myanmar.Proest Pro Rohongya Media and Organizations WorldwideMuslims and Rohingya from London, UK and USA and World bribealot of money to Anna Jones , BBC , UK government , UK Foreign Secretary William Hague and VOA , RFA , DVB , UN , UNHCR , NGO that Rakhine state is Rohingya state. So All Rakhine and Myanmar people from London, other cities in UK and USA , World and NLD and Myanmar Government protest Anna Jones , BBC to demand apology from Anna Jones and BBC . Skame on you Anna Jones and BBC.All Rakhine and Myanmar ( Burmese ) people in Myanmar and World must protest in front of UN in New York, USA , UNHCR, NGO, Pro Rohingya and Muslim Partys, Pro Rohingya and Muslim Organizations , Pro Rohingya Bangladesh Embassy, Saudi Arabia Embassy, British Embassy , British Consulate , and other pro Rhohingya and pro Muslim country Embassies and Consulates , Pro Muslim Organizations in Myanmar ( Burma ) and world about Rohingya.
28 June 2012 01:10